Umqeqeshi woSuthu uselinde indweba yeDiski Challenge, lisuke lihlale - Bayede News
Ithemba ngoWayde enqoba owokozilolongela i-Olympics
Umqeqeshi weqembu AmaZulu FC Reserve agijima kuDStv Diski Challenge, uthi iqembu lakhe selimi ngomumo.
USboniso “Nini” Vilakazi usho lokho kade enengxoxo ekhethekile nelaboHlanga. Bekulindeleke ukuthi imidlalo yeDStv Diski Challenge iqale kule mpelasonto, kodwa abaxhasi bayo ngeledlule banquma ukuthi ayimiswe kuze kube uyakhuluma uMengameli wezwe uCryil Ramaphosa ngesimo sokhuvethe.
URamaphosa ubekhuluma ngoLwesibili, kunokwesaba ukuthi kungenzeka avale izwe kodwa kwangaba njalo okusho ukuthi maduze nje imidlalo izobuyela enkundleni.
“Thina kade saqala ukuthi sizilungiselele, lokho besizokutshengisa kule mpelasonto ngokuthi sinqobe. Kodwa njengoba sesiphinde sathola isikhathi sokuziqeqesha ngethemba ukuthi imidlalo izoqala sesivuthwe kakhulu. Kulesi sikhathi sisebenze kakhulu ngabagadlali bethu ukuthi bekwazi ukusebenzisa amathuba uma bewathola. Iqiniso lithi noma ungadlala kahle kanjani kodwa umdlalo uwunqoba ngokuthi ushaye igoli noma amagoli,” kusho uVilakazi.
Lo mqeqeshi akukapheli isikhathi esingakanani eqashwe Usuthu. Ngaphambi kokufika lapha ubeqeqesha inkulisa edume ngokukhiqizela amaqembu asePortugal abadlali iKZN Academy.
“Siyidlalile imidlalo embalwa yobungani, abadlali bami batshengisile ukuthi bavuthiwe kakhulu. Okusele manje ukuthi sidlale umdlalo weligi lokho sikukhombise ukuthi asikwenzi emdlalweni yobungani nje kuphela.” kusho lo mqeqeshi.
AmaZulu FC Reserve adlale neqembu eligijima ku-ABC Motsepe League i-Ethekwini Coastal alibhaxa ngamagoli amane kwelilodwa, adlala neMbumbulu Academy ayidla ngamagoli amane eqandeni.
Ebuzwa ukuthi njengoba iqembu elikhulu lenza kahle nje akanayo yini ingcindezi uthe: “Uma ungumqeqeshi kumele uhlezi usebenza ngaphansi kwengcindezi. Ungabuza noma imuphi umqeqeshi uzokutshela ukuthi ikhona ingcindezi asebenza ngaphansi kwayo. Ngeke ngaqamba amanga ayikho enkulu kumina, okumele ngikwenze nje ukuthi iqembu kumele liqede ishobolo ngokuthi linqobe iDStv Diski Challenge bese ngikhiqiza abadlali beye eqenjini elikhulu,” kusho uVilakazi.
Uthe indlela asebenza ngayo imenza akhule kakhulu emsebenzini wakhe. Ekuseni ulekelelana nabaqeqeshi beqembu elikhulu ejimini, bese kuthi ntambama aqeqeshe elincane.
“Siyinto eyodwa nabaqeqeshi bethimba elikhulu. Indlela esisebenza ngayo iyangisiza kakhulu ngoba engikuncela kubaqeqeshi beqembu elidala ngiyakusebenzisa kuReserve. Uma ngihlanganisa ulwazi lwami nengiluthola kuBenni McCarthy nethimba lakhe, kwenza ngibe nokuzethemba ukuthi uma ibuyela enkundleni imidlalo yeDStv Diski Challenge sobe singabambeki,” kusho lo mqeqeshi.
ElaboHlanga limbuza ukuthi ubona kuyini imfihlo kaMcCarthy uthe: “Engingakusho ukuthi uMcCarthy usebenzisana kahle nethimba lakhe. Ukubambisana kuyinto ekhona ngaphandle nangaphakathi kwenkundla. Ithimba lakhe lihlezi lizimisele ukusebenza kanzima. Okunye ukuthi ukholelwa kakhulu ekudlaleni ibhola, abadlali iyona into abayenza kakhulu uma beziqeqesha ingakho nje uma ubona imidlalo ya-AmaZulu FC ahlezi ekhanda amathuba amaningi okusho ukuthi ahlezi eligcinile ibhola ngakuwona.”
UMcCarthy ethimbeni lakhe usebenzisana noMoeneeb Josephs oke waba ngunozinti kuleli qembu, uVasili Manousakis obekuCape Town City noSiyabonga Nomvethe naye oke waba ngumgadli kuleli qembu.
Kuyimanje Usuthu emveni kwemidlalo engama-20 luhlezi endaweni yesihlanu kulogi.
Lusemzabalazweni wokuthi lufeze iphupho likamphathi walo uMnu uSandile Zungu, owathi ufisa luqede lubalwa namaqembu amane aphezulu.
Khonamanjalo, leli qembu lethule uThabo “Section 10” Qalinge njengomdlali walo omusha. Lo mdlali onebhola elidle ngomjiko uzakhele udumo ku-Orlando Pirates, uzogqoka unombolo-47.